Забур 95 CARS - Nnwom 95 AKCB
1Mommra mma yɛnto dwom wɔ anigye so mma Awurade;
2Momma yɛmfa aseda mmra nʼanim,
3Efisɛ Awurade yɛ Onyankopɔn kɛse,
4Ne nsam na asase mu nneɛma nyinaa wɔ,
5Po wɔ no, ɔno na ɔbɔe,
6Mommra, mma yɛnkotow nsom no.
7Ɔyɛ yɛn Nyankopɔn;
8mummpirim mo koma sɛnea moyɛɛ wɔ Meriba no,
sɛnea moyɛɛ da no wɔ Masa, sare no so no,
9Ɛhɔ no, mo mpanyimfo sɔɔ no hwɛe,
a na wonim nea meyɛ maa wɔn.
10Me bo fuw saa nnipa no mfe aduanan
na mekae se, “Wɔyɛ nnipa a wɔn koma aman afi me ho,
na wɔanhu mʼakwan.”
“Wɔrenhyɛn mʼahomegye mu da.”
AKCB : Nnwom 95